Nosy-Be : Hisitraka ivon-toeram-pamokarana herinaratra -
AccueilRaharaham-pirenenaNosy-Be : Hisitraka ivon-toeram-pamokarana herinaratra
29/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny fanomezana herinaratra ireo faritra manerana an’i Madagasikara. Omaly, nitsidika an’i Nosy-Be ny tenany niaraka tamin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta sasantsasany. Tamin’izany indrindra no nanatanterahana ny lanonana fametrahana ny vato fototra ho fanombohan’ny asa fananganana ivon-toeram-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny masoandro any an-toerana.
Raha ny mahakasika ity ivon-toeram-pamokarana herinaratra vao hatsangana ity, dia amina velaran-tany mirefy 10 ha no hametrahana azy ary hamokatra herinaratra 5MW izany. Ho vita amin’ny taona 2019 ny asa fananganana, ary avy hatrany dia afaka miasa io ivon-toeram-pamokarana herinaratra vaovao io.
Nambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa hitombo ny famokarana herinaratra ao Nosy-Be, ary hisy ihany koa ny fihenan’ny famokarana avy amin’ny fampiasana gazoala amin’ny fahavitan’ny ivon-toerana. “Efa miroso amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina hatrany isika. Tsy hitsahatra anefa isika raha tsy voatrandraka avokoa izany”, hoy ny Filoham-pirenena.
Nanambara kosa tetsy andaniny ny tale jeneralin’ny orinasa Jirama, Jaomiary Olivier fa mitaky mihoatra ny 5MW ny filàn’ny tanànan’i Nosy-Be ankehitriny. “Mila miatrika ny fivoarana ara-toekarena, toa ny fitomboan’ny famatsiam-bola eo amin’ny sehatry ny fananganana trano fandraisam-bahiny ohatra isika. Noho izany, amin’ny fahazoana io ivon-toeram-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny masoandro io dia hanana tahiry mitentina 1 Tapitrisa Dolara isan-taona isika amin’ny fampihenana ny fampiasana gazoala”, hoy hatrany ny tale jeneralin’ny orinasa Jirama.
Ankoatra izay, nahazo toeram-pamatsian-drano madio vaovao ihany koa ny tanànan’i Nosy-Be. Mahazaka tahirin-drano hatramin’ny 500 m3 izany. Anisan’ny mampijaly ny mponin’i Nosy-Be mantsy raha ny voalaza ny famatsian-drano izay ambany dia ambany. Amin’izao fotoana izao, voavaha ny olan’ny mponina tamin’ny nanomezan’ny Filoham-pirenena azy ireo toeram-pamatsian-drano madio vaovao. Mahatratra hatrany amin’ny 1 731 000 000 Ar kosa ny teti-bidin’ny fanamboarana sy fananganana izany fotodrafitrasa izany.
Tetsy ankilany, notokanan’ny Filohan’ny Repoblika ihany koa ny ivon-toeran-ketra tao an-tampon-tanànan’i Nosy-Be. Anisan’ny mampandroso sy mampidi-bola iny faritra iny mantsy ny fandoavan-ketra.
Etsy andaniny, hotokanan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina anio ihany koa ny lalam-pirenena fahasivy (RN9) mampitohy ny tanànan’i Toliara amin’Analamisampy, izay mirefy 107 km.